Matambo matsva eApple Watch | Ndinobva mac
Matambo matsva eApple Watch
Maawa mashoma apfuura, Apple yakagadziridza webhusaiti yayo kuti iwedzere kwete chete rinotevera chizvarwa iPad Pro, asi zvakare yakavandudza iyo MacBook Air uye Mac Mini. Nenzira, atora mukana ku wedzera huwandu hwemabhanhire izvo zvinoita kuti zviwanikwe kune vese vashandisi, kana isu tanga tisina kukwana neiya atove kuwanikwa.
Apple inotipa 4 dzakasiyana tambo tambo: mutambo, mutambo chiuno, dehwe uye simbi isina simbi. Mukati merudzi rumwe nerumwe, tinogona kuwana akasiyana mapoka, saka zvinokwanisika kusawana tambo inoenderana nezvatinoda uye zvatinofarira, chero bedzi isu tichitsvaga Apple mhando.
0.1 Matambo matsva emitambo
0.2 Mitsva yemitambo yakasungirwa tambo
0.3 Nyowani Nike Sport Straps
0.4 Nyowani Nike Sport loop tambo
0.5 Matsva ematehwe matsva
0.6 Nyowani Hermés tambo dzematehwe
1 Stainless simbi tambo
Matambo matsva emitambo
Aya mabhande matsva ane mutengo wakaenzana neiya iripano yapihwa neApple muchikamu chimwe chete ichi: 49 euros.
Mitsva yemitambo yakasungirwa tambo
Mutengo wezvose zvakasungirirwa tambo ndeye 49 euros, mutengo mumwe chete semabhanhire emitambo.
Vitamin C ruvara
Nyowani Nike Sport Straps
49 euros ndiwo mutengo wezvese zvitsva uye zviripo zvisungo pasi peiyo Nike brand.
Nhema / Yakasimba Lime
Pakati pehusiku Turquoise / Aurora Green
Nyowani Nike Sport loop tambo
Iyo jira vhezheni pasi pezita reNike, iine mutengo wakaenzana neese apfuura: 49 euros.
Nyika Indigo / Yakasimba Lime
Matsva ematehwe matsva
Kana tasvika paganda, zvinhu zvinoshanduka, sezvo mutengo uchipfura kusvika 149 euros yemamodeli ane buckle. Iwo eganda mamodheru ane Loop dhizaini akatemerwa mutengo pa 99 euros.
Raspibheri neazvino bharuki
Yakadzika bhuruu ine yemazuva ano buckle
Peacock yeganda chiuno
Nyowani Hermés tambo dzematehwe
Tambo dziri muchikamu cheHermés ndidzo dzinodhura uye dzinoyevedza idzo Apple inoita kuti dziwanikwe kwatiri. Izvo zvakagadzirwa ne mhuru uye neyakagadzirwa nemaoko. Iyo Rakareruka Rwuno mabhande anotanga pamakumi matatu nemakumi matatu emamiriyoni euros nepo Rwendo Rwechipiri ruchiwanikwa kubva ku369 euros.
Rakareruka Rwendo mu Swift ganda reganda Noir / Blanc / Kana
Rakareruka Rwendo muOrange Swift dehwe
Kaviri Kuratidzira kwakadhindwa muNair Swift dehwe
Kaviri Kuratidzira kwakadhindwa muBlanc Swift dehwe
Rakareruka Rwendo Rallye muGala ganda ganda Noir
Stainless simbi tambo
Mukati meichi chikamu isu hatisi kuwana chero nyowani nyowani kune yazvino katarogu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Matambo matsva eApple Watch
Yakanakisa sarudzo kune iyo nyowani keyboard yeiyo iPad Pro 2020
Kuburitswa kwemitambo yeBeastie Boys Nhau zvinyorwa zvakamiswa